Farmaajo oo hor tagaya Baarlamanka maalin fasaxa | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo hor tagaya Baarlamanka maalin fasaxa
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa hortagaya Golasha Shacabka BJFS maalin fasax ah, adduunka oo dhana uu xusayo munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee weli maamulaya xafiiska Villa Somalia Maxamed Farmaajo ayaa lagu wadaa saacado kaddib in uu khudbad ka jeediyo xarunta Golaha Shacabka BJFS isagoo ka codsan doona sida uu sheegay in la laalo sharcigii hore ee ay ansixiyeen kaasoo siinayay muddo laba sano oo dheeri ah!
Farmaajo ayaa dalbaday kulanka maanta ee Golaha Shacabka kaasoo ku soo aaday maalin fasax ah, adduunka oo dhan uu xusayo maalinta shaqaalaha loo asteeyay ee 1 -da May taasoo sanad walba la xuso! Isagoo Villa Somalia ka jeedinayay khudbad ayuu dalbaday kulanka maanta, mana uusan ogeyn maalinta sabtida ah in ay ku beegan tahay 1 -da May oo ah maalinta shaqaalaha adduunka!
Xildhibaanada taabacsan Farmaajo ayaa wada qorshe uu hoosta kasoo dhiibay, kaasoo ay ku ballameen in ay iska diidaan soo jeedintiisa, taasoo sida uu aaminsan yahay ka dhigaysa inuusan wax eed ama dambi ah ku lahayn, xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa gaaray go'aankaas ayuu rabaa inuu ku doodo, islamarkaasna waxay qorsheynayaan in ay cod gacan taag ah xilka uga qaadaan RW Rooble sidii R'iisul Wasaarihii ka horreeyay ee Kheyre.